FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA PRESA CANARIO - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana presa Canario
Tobatacaya de Rey Gladiador, vehivavy Dogo Canario 12 volana ary Tompondakan'i Junior any Polonina, sary natolotr'i Rey Gladiador
Lisitry ny alika mifangaro Presa Canario
Alika Presa Canario
Ny Presa Canario dia manana lohany matanjaka sy toradroa izay saika sakany mitovy amin'ny halavany. Ny sakelaka dia malalaka. Lalina sy malalaka ny tratra. Atsangana kely ny rump. Ity karazana ity dia manana hoditra matevina, taolana matevina, hozatra matanjaka ary loha be manana valanorano lehibe. Voakapa matetika ny sofina. Ny loko dia misy fawn ary misy marika fotsy misy brindles fotsy hita indraindray.
Alika malala-tanana sy be fitiavana ny Presa. Mpiaro ny fianakavian'izy ireo lehibe izy ireo ary teraka ho mpiaramiasa ary koa mpiambina. Tsy matoky olon-tsy fantatra izy ireo, saingy tokony hanaiky olon-tsy fantatra raha eken'ny tompony. Tokony ho mailo sy vonona hiaro ny tompony na ny fananany izy ireo raha ilaina izany. Amin'ny ankapobeny dia karazany mangina izy io nefa manana hodi-kazo mampatahotra be. Ity karazana ity dia mitaky tompona mahatakatra ny natiora alpha an'ny canine. Tsy misy mpikambana ao amin'ny fianakaviana afaka mahazo aina eo akaikin'ny alika. Kanaria dia miavaka amboa mpiambina . Ny fisehoan'izy ireo fotsiny dia misakana, tsy lazaina intsony ny fahafahan'izy ireo mifanatrika mpiditra an-tsokosoko . Toy ny alika mpiambina rehetra dia tsy maintsy atao ny mampiofana ny fiarahamonina aloha sy ny fanarahana fankatoavana. Indraindray ianao dia hanana herisetra alika ao amin'ny Presa Canario, fa amin'ny fiaraha-miasa sy fiofanana mety dia izany no ankanavaka fa tsy ny lalàna. Ny Presa Canario dia mifaninana ary mahomby amin'ny fampifanarahana, fankatoavana, alika vy, hakingana, fitsorohana amin'ny dock, schutzhund ary fitsapana miasa hafa. Betsaka no notezaina tamin'ny alika, saka, vorona, ary mandady. Ny tompona dia tsy maintsy maka ny alikany mandeha isan'andro ny fonosana mba hanomezana fahafaham-po ny fahatsapan'izy ireo fifindra-monina. Ny alika dia tsy tokony handeha eo alohan'ilay olona mitana firaka, satria ny mpitarika ny kitapo no mandeha aloha. Ny alika dia tsy maintsy mandeha eo anilany na ao aoriany. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria alika dia mampita ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka.
Milanja: 80 - 100 pounds sy ambony (36 - 45 kg)
Hahavony: 21 - 25 santimetatra (55 - 65 cm)
Ny Presa Canario dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary hanao tsara indrindra amin'ny tokotanin-tsaha farafahakeliny.
Ity karazana ity dia mila raisina a mandeha isan'andro, mandeha lavitra . Aza avela hivoaka eo alohan'ny mpikarakara ity alika ity rehefa mandeha an-tongotra. Ny mpitarika Pack dia mandeha aloha ary ny Presa dia tokony hahatakatra fa ny olombelona rehetra dia amboniny ao anaty filaharana. Hiroborobo ny Presa raha omena asa hatao.
Alika kely 7 ka hatramin'ny 9 eo ho eo
Ny palitao fohy sy henjana dia mora karakaraina. Borosio amin'ny borosy mafy volo ary esory amin'ny tapa-kazo na chamois mba hahavitana mamirapiratra. Mandro sy shampoo maina rehefa ilaina izany. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny razamben'i Presa Canario dia mety ahitana ny ankehitriny lany tamingana Bardino Majero indizeny sy tera-tany niampita tamin'ny Mastiff anglisy nohafarana. Izy io dia novolavolaina tany amin'ny nosy Canary tamin'ny taona 1800 ho alika mpiompy. Ny nosy Canary dia nantsoina tamin'ny alika. Alika tratra io ka nahazo omby tsy voafehy sy lambo dia. Natao hiarovana ny biby fiompy amin'ny biby mpiremby sy ny olona. Taty aoriana dia nampiasaina nandritra ny fotoana fohy ho toy ny mpiady alika nataon'ny tantsaha mankaleo ho an'ny fialamboly. Voarara ny ady amin'ny alika taty aoriana ary lasa nalaza kokoa ny alika hafa. Saingy misy ny tantsaha sasany izay nanohy nitandrina ny karazany ary niasa ho alika fiompiana.
Bruno the UKC nisoratra anarana Perro De Presa Canario. Hijery misimisy kokoa momba an'i Bruno
Ares ilay presa Canario madio eo amin'ny iray taona eo ho eo
Ares ilay presa Canario madio eo amin'ny 5 volana eo ho eo
Drago de Dona Aurora amin'ny 3 taona, milanja 116 pounds
Topatacaya de Rey Gladiador the Dogo Canario amin'ny maha-alika kely 2 volana azy, sary natolotr'i Rey Gladiador
Alika kely Dogo Canario, zaza kely iray volana 3,5, sary natolotr'i Rey Gladiador
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Presa Canario
Presa Canario Sary 1
Presa Canario Sary 2
sarin'ny spaniel springer anglisy
lisitry ny karazana alika az
jack russell bulldog afangaro alika kely
mpiompy st bernard fohy volo
famerenana labo mainty volamena